I-Bicolor Labeo Intlanzi | Ngeentlanzi
IBicolor Labeo Intlanzi
Ezi ntlobo zeentlanzi ngoku zinqweneleka ukuba zibe kwi-aquarium. Inkqubo ye- bicolor labeo eyeyakwa Intsapho yaseCyprinidae Inemvelaphi yolwandle lwe-mpuma yeAsia. Yenye yeentlanzi ekulula ukuyichonga kuba, njengoko igama layo libonisa, inemibala emibini emzimbeni wayo, umsila wayo unombala obomvu kakhulu ngelixa umzimba wonke umnyama. Ngendlela efanayo, iintlobo ezinomzimba omnyama kunye namaphiko abomvu ziyafumaneka.
Olu hlobo lwentlanzi luphawulwa ngokuba nomva wasemqolo ofana kakhulu noka krebe, yiyo loo nto baziwa ngegama lika red tail shark or black shark fish.
Ukuba ucinga ukuba nentlanzi ye-bicolor labeo kwi-aquarium yakho, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le ntlanzi inokuhlala nezinye iintlanzi zezinye iintlobo okoko zilingana. Nangona kunjalo, akukhuthazwa ukuba bahlale neentlanzi zohlobo olunye, kuba i-aquarium yakho inokujika ibe ngumlo omiselweyo ngenxa yendlela ababa ndlongondlongo ngayo kwiintsapho zabo.
Kwangokunjalo, ukuze i-aquarium ibe neyona meko ibalaseleyo yokuphila kunye nezo zifana kakhulu nezendalo, amanzi kufuneka ahlale phakathi kwama-23 nama-27 amaqondo obushushu. Kufuneka siqiniseke ukuba simisa iintlobo ezahlukeneyo zezityalo ukuze izilwanyana zisabele, zidlale kwaye zondle, kunye nelitye, iingcambu kunye neekorale xa kunokwenzeka.
Kwakhona, kufuneka sikhumbule ukuba i-aquarium efunwa zezi ntlanzi kufuneka ibe yindawo enkulu engaphezulu kweelitha ezingama-150, hayi kuphela ngenxa yendlela ezihlala ngayo ezi zilwanyana, kodwa nangenxa yokuba zifuna indawo eninzi yokuqubha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » IBicolor Labeo Intlanzi
Eyona ntlanzi intle kwaye enemibala eMhlabeni: iAngelfish